चरण printing चरण स्क्रिन प्रिन्टि process प्रक्रियाको बारेमा जान्नुहोस् क्रिएटिव अनलाइन
स्क्रिन प्रिन्टिंगले स्कीजीको सहयोगमा समर्थन (कागज / कपड़ा) मा र color लगाउँदछ जुन राम्रो जाल वा स्क्रिनको माध्यमबाट मसी जान्छ।
यसको बारेमा कुरा गरौं सेरीग्राफीयो एक धेरै सरल प्रविधि हो जुन घरमा आवश्यक सामग्रीको साथ गर्न सकिन्छ। यसको बारेमा केहि राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामी केही थप सैद्धांतिक अवधारणाहरूको संक्षिप्त समीक्षा गर्नेछौं।
1 स्क्रिन प्रिन्टि is भनेको के हो?
2 शब्दको उत्पत्ति
3 मानक प्रक्रिया
स्क्रिन प्रिन्टि is भनेको के हो?
स्क्रिन प्रिन्टिंग एक म्यानुअल मुद्रांकन विधि हो जुन हामीलाई कल गरिएको जाल मार्फत ट्रेस गरिएको छविहरू ट्रान्सफर गर्न अनुमति दिन्छ स्क्रिन, मुद्रण गर्न सतहमा मसीको साथ गर्भवती छ। तपाइँ छाप्न चाहानुभएको प्रत्येक र Forको लागि हामीलाई थप स्क्रिन चाहिन्छ, अर्थात यसले तहहरू मार्फत काम गर्दछ।
हामी भन्न सक्दछौं कि यो सब भन्दा पुरानो प्रविधि हो, यद्यपि यो कुनै लेखक वा आविष्कारकलाई श्रेय दिदैन। मिश्रीहरू र चिनियाँहरू यस प्रकारको मुद्रांकनको प्रमुख अग्रदूत थिए र आज, यो यसको सरलता र कम लागतका कारण विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय मुद्रांकन प्रविधि हो। वर्तमानमा यसलाई मसिनरीको साथ आधुनिकीकरण गरिएको छ, यसैले, प्रक्रिया धेरै छिटो छ।
सेरिग्राफी शब्द ल्याटिन मूलबाट आएको हो - सेरिकम »(रेशम) र ग्रीक« ग्राफ »(लेखन, वर्णन वा चित्रकलाको कार्य), शब्दहरूको यस संयोजनलाई« रेशम स्क्रिन called भन्न सकिन्छ। त्यसकारण, स्क्रिन प्रिन्टिंग भनेको वाणिज्यिक, औद्योगिक वा कलात्मक अनुप्रयोगहरूको लागि रेशमको माध्यमबाट चित्रण वा लेख्ने टेक्निक हो।
अब हामी अर्डर सूचीबद्ध गर्न गइरहेका छौं जसमा सिल्कस्क्रिन टेक्निक गरिन्छ। चरणहरू निम्न छन्:
सर्वप्रथम, हामीले डिजाईन प्राप्ति गर्नु पर्छ।
पोलिस्टर शीटमा डिजाईन प्रिन्ट गर्दै।
प्लेटमा फोटोलिथको इन्सुलेसन।
अधिक सफा गर्नुहोस्, हामीसँग हातमा कागजको रोल हुनु आवश्यक पर्दछ।
प्लेटको रूपरेखा टेप गर्नुहोस्।
दर्ता बाहिरै पक्कै पनि डिजाइन फ्रेम गर्न को लागी आवश्यक छ।
मसी शाई (चार्ज) को साथ प्लेट Impregnate।
अन्त्यमा, प्रिन्टि support इच्छित समर्थनमा गरिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » कलाकारहरू » स्क्रिन प्रिन्टिंग प्रक्रियाको बारे सिक्नुहोस्